के हो र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ? नेटवर्क मौसम विज्ञान
सौर्यमण्डलका ग्रहहरू सूर्य भनिने केन्द्रीय ताराको चारैतिर घुम्छन् कि सही रूपमा चिनिन सकेन। एउटा ब्रह्माण्ड थियो कि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र थियो र बाँकी सबै ग्रहहरू यसमा परिक्रमा गरे। हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त एउटा हामी आज कुरा गर्न जाँदैछौं जुन सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्र हो र एक स्थिर तारा हो।
हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त कसले विकास गर्नुभयो र यो केमा आधारित छ? यस लेखमा तपाई यसको वैज्ञानिक आधारलाई गहिराइमा जान्न सक्नुहुनेछ। के तपाई उसलाई राम्ररी जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईंले भर्खर पढिरहनु पर्छ 🙂
1 हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तको विशेषताहरू
2 सिद्धान्तका सामान्य सिद्धान्तहरू
3 हेलियोसेन्ट्रिक र जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त बीच भिन्नता
3.1 ग्रहहरूको व्यवहारको व्याख्या
हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तको विशेषताहरू
१ XNUMX औं र १ XNUMX औं शताब्दीको क्रममा त्यहाँ एक वैज्ञानिक क्रान्ति थियो जसले ब्रह्माण्डको बारेमा ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिन खोज्यो। यो एक समय थियो जब सिक्ने र नयाँ मोडेलको खोजी गर्ने प्रबलता थियो। मोडेलहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सम्बन्धमा ग्रहको अपरेशनको व्याख्या गर्न सक्षम हुन सिर्जना गरिएको थियो।
धन्यबाद भौतिक विज्ञान, गणित, जीवविज्ञान, रसायन विज्ञान र खगोल विज्ञान जसको लागि ब्रह्माण्डको बारेमा यती धेरै जान्न सम्भव भएको छ। जब हामी खगोल विज्ञानको बारेमा कुरा गर्छौं, जो वैज्ञानिक खडा हुन्छ निकोलस कोपर्निकस हो। उनी हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तको निर्माता थिए। उनले यो ग्रहको आन्दोलनको निरन्तर अवलोकनमा आधारित छ। यो अघिल्लो भू-केन्द्रित सिद्धान्तको केही विशेषताहरूमा आधारित थियो यसलाई अस्वीकार गर्न।
कोपर्निकसले एउटा मोडल बनायो जसले ब्रह्माण्डको कामको बारेमा वर्णन गर्‍यो। उनले प्रस्ताव गरे कि ग्रहहरू र ताराहरूको गति एक निश्चित ठूला तारामा बान्की जस्ता पथ अनुसरण गर्दछ। यो सूर्यको बारेमा छ। अघिल्लो भू-केन्द्रित सिद्धान्तलाई अस्वीकार गर्न उसले गणितीय समस्याहरूको प्रयोग गर्‍यो र आधुनिक खगोल विज्ञानको लागि जग निर्माण गर्‍यो।
यो उल्लेख छ कि कोपर्निकस हेलियोसेन्ट्रिक मोडल प्रस्ताव गर्ने पहिलो वैज्ञानिक थिएनन् जसमा ग्रहहरू सूर्यको वरिपरि घुमे। यद्यपि यसको वैज्ञानिक आधार र प्रदर्शनको लागि धन्यवाद, यो उपन्यास र समयबद्ध सिद्धान्त हो।
त्यस्तो आयामको धारणामा परिवर्तन देखाउन प्रयास गर्ने सिद्धान्तले जनसंख्यालाई असर गर्छ। एकातिर, कहिलेकाँहि खगोलविद्हरूले भू-केन्द्रित ध्यान नराखी गणितिय समस्याहरू समाधान गर्ने कुरा गर्थे। तर उनीहरूले अस्वीकार गर्न सकेन कि कोपर्निकसद्वारा प्रदान गरिएको मोडेलले ब्रह्माण्डको कामको बारेमा पूर्ण र विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान गर्‍यो।
सिद्धान्तका सामान्य सिद्धान्तहरू
हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त केहि सिद्धान्तमा आधारित छ सबै अपरेशनको वर्णन गर्न। ती सिद्धान्तहरू हुन्:
आकाशीय पिण्डहरू तिनीहरू एकल बिन्दुको वरिपरि घुम्दैनन्।
पृथ्वीको केन्द्र चंद्र गोलाको केन्द्र हो (पृथ्वी वरिपरि चन्द्रको कक्षा)
सबै क्षेत्रहरू सूर्यको वरिपरि घुम्छन्, जुन ब्रह्माण्डको केन्द्र नजिक छ।
पृथ्वी र सूर्य बीचको दूरी पृथ्वी र सूर्य सिताराहरु को दूरी को एक नगण्य अंश हो, तारा कुनै पनि लंबन पालना छैन।
ताराहरू अचल हुन्छन्यसको स्पष्ट दैनिक आन्दोलन पृथ्वीको दैनिक घुमावको कारणले भएको हो।
पृथ्वी सूर्यको वरिपरि गोलाकारमा सर्छ, सूर्यको स्पष्ट वार्षिक माइग्रेसनको कारण। पृथ्वीमा एक भन्दा बढी गति छ।
सूर्यको चारैतिर पृथ्वीको परिक्रमण गतिले ग्रहहरूको चालको दिशामा स्पष्ट पछाडि पार्छ।
बुध र शुक्रको उपस्थितिमा परिवर्तनहरू वर्णन गर्न प्रत्येकका सबै कक्षहरू राख्नुपर्‍यो। जब ती मध्ये एक पृथ्वीको सम्बन्धमा सूर्यबाट टाढा रहेको छ भने यो सानो देखिन्छ। जे होस्, तिनीहरू पूर्ण रूपमा देख्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, जब तिनीहरू सूर्यको पृथ्वीको उही भागमा हुन्छन्, तिनीहरूको आकार ठूलो देखिन्छ र तिनीहरूको आकार आधा चन्द्रमा हुन्छ।
यस सिद्धान्तले पूर्ण रूपमा मंगल र बृहस्पति जस्ता ग्रहहरूको प्रतिगामी गति वर्णन गर्दछ। यो पूर्ण रूपमा देखाइएको छ कि पृथ्वीमा खगोलविदहरु संग सन्दर्भ को एक निश्चित फ्रेम छैन। यसको विपरित, पृथ्वी स्थिर गतिमा छ।
हेलियोसेन्ट्रिक र जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त बीच भिन्नता
यो नयाँ मोडल विज्ञानको लागि क्रान्ति हो। अघिल्लो मोडेल, जियोसेन्ट्रिक एक, पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र थियो भन्ने तथ्यमा आधारित थियो र यसलाई सूर्य र सबै ग्रहहरूले घेरिएको छ। यो मोडल केवल दुई प्रकारका सामान्य र स्पष्ट प्रेक्षणहरूमा कम गरिएको थियो। पहिलो चीज तारा र सूर्यलाई हेर्नु हो। आकाशमा हेर्नु र दिनभरि कसरी हेर्नु सजिलो छ। आकाशमा सार्नुहोस्। यस तरिकाले, यसले यस्तो महसुस गर्छ कि यो पृथ्वी हो जुन स्थिर छ र बाँकी आकाशीय पिण्डहरू जुन गतिशील छन्।
दोस्रो, हामी पर्यवेक्षकको परिप्रेक्ष्य फेला पार्दछौं। यो केवल स्वर्गको शरीरमा सारियो, तर पृथ्वी जस्तो लागेन चाल जस्तो लाग्दैन। तिनीहरू डु and्गामा हिडे र कुनै चालको भावविना तिनीहरू चले।
ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीको अवधिमा पृथ्वीलाई समतल मानिएको थियो। यद्यपि यी अरस्तु मोडलहरूले हाम्रो ग्रह गोलाकार थियो भन्ने तथ्यलाई समाहित गर्‍यो। यो आइपुगेको थिएन खगोलविद् क्लाउडियस टोलेमी कि ग्रहहरु को आकार र सूर्य को बारे मा विवरण मानकीकृत थियो। टोलेमीले तर्क गरे कि पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा थियो र सबै ताराहरू यसको केन्द्रदेखि मध्यम दूरीमा थिए।
क्यापर्लिक क्याथोलिक चर्चले जेलमा हालेको डरले कोपर्निकसलाई उनको अनुसन्धान रोक्न लगायो र उनको मृत्युको समय सम्म प्रकाशित नगरेको थियो। यो तब हो जब उनी मर्ने थिए जब उनले १ die1542२ मा यो प्रकाशित गरे।
ग्रहहरूको व्यवहारको व्याख्या
यस खगोलविद्ले बनाएको यस प्रणालीमा प्रत्येक ग्रह दुई क्षेत्रहरूको प्रणाली द्वारा सारिएको छ। एउटा डेफरेन्शिअल हो र अर्को एपिकुल। यसको मतलव डिभरेन्ट एक सर्कल हो जसको केन्द्र बिन्दु पृथ्वीबाट हटाइएको छ। यो प्रत्येक मौसमको अवधि बीच भिन्नताहरू वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको थियो। अर्कोतर्फ, एपिसिल डिभेलर्ड एम्बेडमा एम्बेड गरिएको छ र कार्य गर्दछ यदि यो अर्को पा another्ग्राहरूको बीचमा एक प्रकारको पा wheel्ग्रा हो।
एपिसाल व्याख्या गर्न प्रयोग गरिन्छ आकाशमा ग्रहहरूको प्रतिगामी गति। यो देखिन सकिन्छ तिनीहरू सुस्त भएर पछाडि सर्छन् पछि पछाडि सर्न।
यद्यपि यस सिद्धान्तले ग्रहहरूमा देखाइएको सबै आचरणको बयान गरेको छैन, तर यो पत्ता लागेको थियो कि ब्रह्माण्डको अध्ययनको आधारका रूपमा आजसम्म थुप्रै वैज्ञानिकहरू सेवा गरिरहेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » के हो र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ?
सैन मिगुएल को गर्मी